माघ २२ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल –
माघ २२ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
February 4, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on माघ २२ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
मेष (चु.चे.चो.ला.लि.लु.ले.लो.अ) :–
काममा चुनौती देखिए पनि प्रतिस्पर्धाबाट लाभ मिल्नेछ । बोलीको भरमा काम सम्पादन हुने योग छ । विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ । व्यापारमा भने कम मात्र फाइदा होला । पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ ।
वृष (इ.उ.ए.ओ.वा.वि.वु.वे.वो) :–
आम्दानी बढ्नेछ र उठ्नु पर्ने रकम हात लागी हुनेछ । धेरै श्रमपछि अलि कम मात्र प्रतिफल पाइने छ । भएको आम्दानी सञ्चय गर्न नसकिएला । मालमत्ता पनि चोरी वा नष्ट हुने योग छ, सचेत रहनुहोला । विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् ।
मिथुन (क.कि.कु.घ.ङ.छ.के.को.ह) :–
कामको दायित्व बढ्नेछ । परिवारजनमा खर्च बढ्नेछ । उत्साहमा कमी आउला । अरूको विश्वास जिते पनि आफन्तबाट धोका हुन सक्छ, सचेत रहनुहोस् । अधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ । शत्रुहरूको चलखेल बढ्नाले केही चुनौती सामना गर्नपर्ला । प्रयत्न गर्दा मौकाको फाइदा लिन सकिनेछ ।
कर्कट (हि.हू.हे.हो.डा.डि.डु.डे.डो) :–
रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । धार्मिक तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा संलग्नता बढ्नेछ । पढाइमा राम्रै प्रगति हुनेछ । पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ । विशेष सभा समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । व्यापारतर्फ फाइदा छ ।
सिंह (मा.मि.मु.मे.मो.टा.टि.टु.टे) :–
प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् । राम्रै फाइदाको योग छ । श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । प्रतिस्पर्धा वा मुद्दा मामिलामा विजयी भइनेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै फाइदाको योग छ । आत्मविश्वास बढ्नेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ । राम्रै फाइदाको योग छ ।
कन्या (टो.प.पी.पू.ष.ण.ठ पे.पो) :–
काममा सहयोग प्राप्त होला । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ । पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ ।
तुला ( रा.री.रु.रे.रो.ता.ती.तु.ते) :–
विगतका समस्या बल्झिन सक्छन् । घरेलु समस्यामा पनि अल्झनु पर्ने देखिन्छ । मिथ्या भ्रमणमा समय बित्न सक्छ । स्वास्थ्यगत समस्याले सताउने देखिन्छ । उपचारमा खर्च हुने योग छ । पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ । मनपर्ने बस्त्र, अलंकार उपहार पाइने योग छ । कामबाट फुर्सद मिल्नेछ ।
वृश्चिक (तो.ना.नि.नु.ने.नो.या.यि.यु) :–
विद्यामा कमजोरी र लेनदेनमा विवाद होला । प्रयत्न गर्दा व्यावसायिक काम सम्पादन हुनेछन् । इष्टदेवको पूजा उपासना गर्नाले तपाईंलाई फाइदा हुनेछ । केही विवादमा समेत परिने योग छ, सचेत रहनुहोस् । दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ । सवारी साधनको प्रयोगमा अलि सावधानी अपनाउनु पर्ला ।
धनु (ये.यो.भा.भी.भु.ध.फा.ढ.भे) :–
रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ । विशेष सभा समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ । आर्थिक अभावले भने अलि सताउनेछ । काममा माता पिताको सहयोग प्राप्त होला । कृषि चौपायाबाट लाभ मिल्नेछ । नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । स्थायी सम्पत्ति जोड्ने समय छ ।
मकर (भो.जा.जी.जू.जे.जो.ख.खि.खु.खे.खो.गा.गी) :–
आर्थिक उपार्जनमा सुधार आउनेछ । परिश्रम परेपनि काममा सफलता नै मिल्नेछ । भाग्योन्नतिको समय छ । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ । नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । प्रशस्त धन आर्जन गर्ने मौका छ । पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ । मान सम्मान बढ्नेछ ।
कुम्भ (गु.गे.गो.सा.सी.सु.से.सो.द) :–
दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ । व्यावसायिक यात्रा सम्भावना छ । आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । अलि बाध्यताका काममा जुट्नुपर्ला । प्रतिस्पर्धी परास्त होलान् । सानो प्रयत्नले पनि राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ । कृषि कर्म र व्यावसायिक काममा भने केही चुनौती सामना गर्नुपर्ला ।
मीन (दी.दु.थ.झ.ञ.दे.दो.च.ची) :–
पुरानो समस्याले केही झमेला आइलाग्न सक्छ । दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही असमझदारी बढ्न सक्छ । कृषि तथा पशुपालनमा खर्च बढ्नेछ । परिवारजन तथा बन्धु बान्धवबीच आत्मीय भाव बढ्नेछ । भूमि तथा मातृधनबाट लाभ लिने समय छ । बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्न मौका छ ।
गुल्मीको धार्मिक स्थल रेसुङ्गामा हिमपात हेर्नुहोस्।
कमिसनको चक्करमा तीन साझेदार’को ह’ त्या दया छ भने Rip लेख्नुहोस
आजको राशिफल २०७७ फागुन ४ गते, मंगलवार,
February 16, 2021 February 16, 2021 खबर समृद्ध
असार २३ गते बुधबार : सुपादेउरालीको दर्शन गरि राशिफल हेर्नुहोस ! भेटी स्वरुप सबैले सेयर पनि गरौ !
July 6, 2021 खबर समृद्ध